Umsiki wehembe likaZuma lokuya etiyeni ukhuluma nathi | Scrolla Izindaba
Umsiki wehembe likaZuma lokuya etiyeni ukhuluma nathi
Kumsiki wengqephu uSonwabile Ndamase, noma iluphi udumo lomsebenzi wakhe lubalulekile.
Umsiki wengqephu kaJacob Zuma yamashethi ayangawo emcimbini wetiye utshele abakwa-Scrolla.Africa ukuthi wethuke kakhulu ngesikhathi ebona uhlobo lomkhiqizo wakhe uduma nge “tea shirt challenge.”
UNdamase akakhathazwa wumonakalo ozolethwa wudumo oluhambisana nowayengumengameli uZuma i-#TeaShirtChallenge.
‘’Ngibone umkhiqizo wami oyigugu ubizwa ngokuthi i-‘the tea shirt challenge’.
“Kodwa ngemuva kokufunda ama-tweets, ngabona ukuthi akukho monakalo omkhulu ongaba khona kumkhiqizo wami. Nginqume ukungafundi kakhulu ngokwenzeka ku-Twitter,” kusho uNdamase.
Uthe uyakuqonda ukuthi abanye abantu kungenzeka abamthandi uZuma.
“Ukucacisa nje kini nakwabanye abantu abangithintile bengicela ukuthi ngitshele uMsholozi ukuthi angalisebenzisi ihembe lami, ngeke ngikwenze lokho.”
Uthe wonke amakhasimende akhe, kubandakanya uNxamalala, izikhulu nababeyizikhulu zezwe bangabaphathi bomkhiqizo wakhe wemfashini.
“Angisoze ngabatshela ukuthi bagqoke nini, kuphi futhi kanjani noma yiziphi izingubo engibakhiqizela zona.”
Ngaphandle kokugqokisa uMandela cishe nabo bonke abaphathi bezwe beNingizimu Afrika yangemuva kowezi-1994, uNdamase uphinde wagqokisa inqwaba yamaqhawe amazwe omhlaba kwezemidlalo nakwezokuncebeleka.
Umthombo wesithombe: @PresJGZuma